Oracle Inoenderera Java Java Kodzero Kurwa neGoogle | Linux Vakapindwa muropa
Oracle Inoenderera Java Java Kodzero Kurwa neGoogle
Mwedzi wapfuura cIsu tinogovana pano pa blog, iyo nhau nezve nharo nyowani iyo Oracle yakavhurazve kuzorwa neGoogle pakushandisa iyo Java API pane Android. Muchinyorwa ichocho takataura nezve chinzvimbo chakatorwa nevechitatu pamusoro penyaya iyi nerutsigiro rwavakaratidza kuGoogle, sezvo makambani nemasangano akasiyana vachitenda zvakasimba kuti kana nyaya ikaitika ichitsigira Oracle, izvi zvinogona kukuvadza hunyanzvi uye kuti kushandiswa kwemaAPI kunofanirwa kuve kwakasununguka kushandisa.
Kutevera nyaya yacho, ikozvino Oracle inotaura kuti Google "yakaita chiito chakajeka chekubiridzira" nekubatanidza rutsigiro rweJava kupinda muApple isina rezinesi remutauro zviri pamutemo uye yakamhan'ara nyaya yacho kuDare Repamusorosoro reUnited States mukugadzirisa kusawirirana pamusoro penyaya dzekopiraiti neGoogle.
Sechiyeuchidzo, Mushure mekutenga Sun Microsystems uye kugara nhaka Java muna 2010, Oracle akamhan'arira Google. pawakaona kuti iyo Mountain View hofori yakaputsa patent-zvine chekuita neJava.
Makambani akasiyana siyana nemasangano anotsigira Google mukutonga zvinopesana neOracle
Google yakanga yakunda zvisarudzo zviviri zvematare mumatare epasi, asi Oracle akavapidigura pachikumbiro uye danho redare redzimhosva rakatsigira Oracle. Google, iyo yaigara ichiramba mhosva dzekutyora, ichitsanangura kuti maAPI haafanire kuve nekodzero dzekodzero nekuti anofanirwa kunyora zvirongwa zvinoenderana, yakange isina imwe sarudzo kunze kwekupinda muUnited States Dare Repamusorosoro senzira yekupedzisira, inoitwa muna Ndira apfuura.
Mwedzi miviri gare gare, Oracle achiri kukumbira Dare Repamusorosoro kuramba chikumbiro cheGoogle zvine chekuita nenyaya iyi.
Google vs. Oracle ndiyo yazvino iteration yekurwa pakati pemaviri maAmerican software giants anga achienderera kweanoda kusvika makore gumi uye anotenderera pamibvunzo miviri yakakosha: Zvivakwa zvemutauro wakaita seJava zvinogona kuchengetedzwa nekopiriti? Uye, kana Hungu , urikukwereta kodhi iyi nekuda kwekudyidzana zvinangwa?
"Hapana kambani ichaita kuti mari hombe ikoshe kuti itange basa rekuvandudza seJava SE, kana Dare iri rikazivisa kuti mukwikwidzi anogona kukopa chaizvo nekuti rinokwezva," anodaro Oracle nharo.
Oracle zvakare anopikisa kuti kukunda kweGoogle kunogona kukanganisa kugona kweUnited States kuita teerera nekodzero pasi rose, nekuti "hatigone kuomerera kudziviriro dzakasimba kunze kwenyika tichisiya izvo zvaunazvo kumba."
Mwedzi wapfuura, Makambani akati wandei eUS, kusanganisira vanokwikwidza neGoogle, vakatsigira nehofori yekutsvaga online pahondo neOracle pamberi peDare Repamusorosoro. Ese makambani ehunyanzvi aya anobvuma kuti kukunda kweOracle kunogona kukanganisa hunyanzvi muindasitiri yeIT uye zvinongoita kuti zviome kugadzira software isingabatana.
Ndokusaka IBM, Microsoft, Mozilla, Creative Commons, Vhura Sosi Initiative, Wikimedia Foundation, Software Freedom Conservancy y mamwe masangano mazhinji nemakambani vakaita sevatori vechikamu vakazvimirira mukutongwa yeDare Repamusorosoro pakati peGoogle neOracle inoenderana nekushandiswa kweJava API pane Android chikuva.
Oracle, iye, tenda kutya uku hakufanirwe kunge kuriko, nekuti kana Google ikabvumidza vagadziri veJava kuti vagadzire nyore manyorerwo eAroid, Java neApple zvinoshandiswa hazvinyatsoenderana Uye kune vese avo vanorumbidza kunaka kwekushandirana, Oracle anoyeuka kuti Google yakabvuma kuve nekuita nemaune Android isingaenderane neJava.
MuChidimbu Oracle inotsanangura kuti nei ichitenda kuti maAPI ari pasi pekuchengetedzwa kwekopiraiti: Iyo Copyright Act inovhara "zvirongwa zvemakomputa" uye haisarure maAPI kana chero imwe mhando yekodhi.
Pakupedzisira, nyaya yacho ichaongororwa pamberi peDare Repamusorosoro munaKurume 24 uyee inotarisira kuti Dare Repamusorosoro riite mutongo waro muna Chikumi. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa chinongedzo chinotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Oracle Inoenderera Java Java Kodzero Kurwa neGoogle
Java yakaipisisa yeApple.
Ndakagara ndichitenda kuti Android yakaputsika mukugadzirwa uye tekinoroji
Vakasununguka sei vanhu vakaita mukuchenesa iyo yekare openoffice kodhi, kubvisa dzinenge dzese nzira dzeJava uye kufambisa zvese kuC.
Java inoyamwa !!
Dambudziko reJava mu android ihondo iri kuunzwa nemakambani maviri. Java yakashanduka yakawanda, uye inogona kushandiswa mu android zvakakwana, asi, isu tine kotlin inokuzivisa iwe kuti ichagara kwenguva yakareba sei.
Iyo nyowani vhezheni yeMyPaint 2.0 inosvika nerutsigiro rwePython 3, kugadzirisa kubrashi uye nezvimwe